Qarax Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Lagula Beegsaday Afgooye. – Calamada.com
Qarax Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Lagula Beegsaday Afgooye.
Qaraxan oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aasa ee meelaha fog laga hago waxa uu saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay wadada isku xirta Buundada Carbiska iyo degmada Afgooye ee gobalka Shabeelada hoose.
Qaraxa ayaa haleelay gaari Cabdi bile ah oo ay la socdeen maleeshiyaatka dowlada Ridada federaalka’iyadoona dhawaaqa qaraxa si aad ah looga maqlay gudaha iyo duleedka degmooyinka Afgooye iyo Lafoole ee gobalka Shabeelada hoose.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in qaraxa burbur xoogan uu gaarsiiyay gaariga walow si rasmi ah aan loo xaqiijin karin khasaaraha nafeet ee Murtadiinta kasoo gaartay qaraxaasi.
Qaraxan ayaa kusoo aadaya xilli howlgal lagu dilay 6 askari oo ka tirsan maleeshiyaatka Nabadsugida dowlada Ridada xalay ciidamada Mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada Hilwaa ee magaalada Muqdisho.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Caalamulyowm Ee Andalus 03-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 04-089-1437 Hijri.